माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट, कतिले पाए सेयर ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर आर्थिक माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट, कतिले पाए सेयर ?
माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट, कतिले पाए सेयर ?
१७ मंसिर २०७७, बुधबार १५:०६
माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ आज (बुधबार) बाँडफाँट भएको छ । १ लाख ८३ हजार २६ जनाले गोलाप्रथामार्फत १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । यसरी बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको ५ कित्ता सेयर भने १० कित्ता भन्दा बढी आवेदन दिने ५ जनालाई १ कित्ताका दरले थप गरिएको छ ।
कुल १ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । जसमा ६ लाख ७४ हजार जनाले १ करोड ३९ लाख ४४ हजार ४ सय १० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १८ लाख ३० हजार २ सय ६५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको होे । यो आईपीओमा सर्वसाधारणले ७.६१ गुणा बढी आवेदन दिएका थिए ।
माउण्टेनले कात्तिक २६ गतेबाट मंसिर ३ गतेसम्म १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । यसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ३९ हजार ३ सय ६१ कित्ता कर्मचारीलाई र ५प्रतिशत अर्थात ९८ हजार ४सय १ कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याइएको थियो ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी १८ लाख ३० हजार २६५ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । क्रेडिट रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ नेपालले यो आईपीओलाई ‘ग्रेड ४’ रेटिङ दिएको थियो । यसले औसतभन्दा कम आधार जनाउने रेटिङ पाएको हो । माउन्टेनले म्याग्दीको नीलगिरी खोलामा ३८ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
पर्यटकलाई लोभ्याउने ‘नारच्याङ’ झरना (फोटोफिचर)
लोकदिप सहकारीको करिब १० करोड लगानी, कोरोना महामारीमा ८ लाख ब्याज छुट